यी खानेकुरा जरुरी छ बच्चाको लागि, जंकफुड होइन !! | सुदुरपश्चिम खबर
यी खानेकुरा जरुरी छ बच्चाको लागि, जंकफुड होइन !!
सुदूरपश्चिम खबर प्रकाशित : भदौ १९, २०७८ 42
आठ महिनापछि बच्चालाई अण्डा सजिलै दिन सकिन्छ । अण्डालाई उमालेर, फ्राई गरेर खान सकिन्छ । यसबाहेक खानामा पनि अण्डाको समावेश गर्न सकिन्छ । अण्डालाई पेनकेक बनाएर पनि खान दिन सकिन्छ । अनलाइनखबर बाट सभार